Mr. Saameynta Smith iyo cadaawaha isdaba joogga ah marka ay la kulmaan 'fikirka kala duwan': Martin Vrijland
Mr. Saamaynta Smith iyo dacaayada isdaba-joogta ah marka la wajaho 'fikrado kala duwan'
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 2 May 2017	• 44 Comments
Yaa xusuusiya muuqaalka filimka 'Matrix' ee 1999 kaas oo qof kasta oo baaskiil ah uu si lama filaan ah u bedeli karo 'wakiilka'? Tan iyo maalintii aan bilaabay qoraal, olole weyn ayaa bilaabay inuu iga dhigo madow. Tani waxay muujinaysaa boggeeda in dhamaan saxarada aan shaki lahayn ee igu saabsan iyo qof kasta oo ka muuqda bogga Facebook waa mid si toos ah loola xiriiriyaa xiriiriyaha madow. Taasi waa inay iska dhigtaa oo ay sida muuqata u yeelato. Dadku ma rabaan inay ka mid noqdaan koox soo socota "fikradda foolxumada maskaxda." Dhibaatadani waxay u dhacdaa qaabdhismeed iyo xoog badan, waxayna u muuqataa inay si fiican u socoto iyada oo la adeegsanaysa shaqaalaha dawladda (caddaynta hore ee halkan loogu bixiyey goobta). Dhibaatadani waxyeelladu waa mid ka mid ah 'tijaabo daan-ii-dameer' ah oo koox ka mid ah daanyeer ay ciqaabo kale u ciqaabtey isla marka uu rabo in uu kor u kaco jaranjarada muuska. Dabeecaddan kooxeed waxaa la qorsheeyey ka dib markii lagu celiyo qabow qabow ee kooxda isku dayday inay koraan salaanka (eeg halkan dhammaan sharaxaadda tijaabada). Hadafka weerarradan waa laba jeer; hal dhinac, waa inay i joojisay inaan sii wado qorista, sababtoo ah saamaynta kala go'doominta; dhinaca kale waxay muujinaysaa dadka kale in aysan ku fuulin jaranjaradaas. Hawlgalkani wuu guul-daraystay. Waan sii socdaa. Xabbad joojinta, waxaa lagu magacaabaa in filinka Matrix.
Wakiilada filimka Matrix ayaa soo bixi kara wakhti kasta. Qof kasta oo u muuqataa in ay iskooda u beddelatid koobiyeyn mar furmi Neo soobixi in furta. Waxaa laga yaabaa inaad taqaanno; haddii aad ka hadlaysid meel ku saabsan dhalasho ama shaqo ku saabsan mowduucyo saameynaya sawirka runta ah ee dadka. Degna dadka qaadan kartaa cadaawad aad u weyn, maxaa yeelay, waxay la hor fikrado in ay kicin aragtida dunida. Morpheus, qof kale ee filimka, sharxayaa in video hoose sida ay taasi dhacdo. Ilaa inta dadka ma arkaan dhex in aanu ku nool nahay xaqiiqada ah milaratigooda, dhisay by naqshadeeyaha ugu weyn (sida qadarin ee Ururada qarsoodiga ah aqoonyahanada), dhawray by fasalka weyn oo difaacay by cid weli fahamsan nidaamka iyo sidaas daraaddeed laftiisa masuulka nidaamka ayaa isbeddeli doona isla marka aad joojiso nidaamka; ilaa iyo inta ay isla markiiba isbeddelayaan oo ay toosin doonaan koorsada adiga kugu habboon. (akhri waxbadan fiidiyowga)
The buugaasi of Forbrydelsen Matrix ayaa ugu danbeyn soo diri nooc ka mid ah singularity u dhexeeya nidaamka naqshadeeyaha ugu weyn iyo dadka soo toosay, taas oo ay xaq u leedahay in ay jirtaa nidaamkan, sida, waxay xoojiyeen wareegga aan dhammaadka lahayn ee Neo si loola dagaallamo oo loo fahmo nidaamka. Tani waa dabcan rabitaanka afduubayaasha iyo beerta xoogga leh. Xitaa jilicsanaanta naftu waa inay ugu dambeyntii u hoggaansamaan jiritaanka Matrix waxayna ku riyaaqaan cabbirada aan dhammaadka lahayn ee laga yaabo inay soo baxaan. Dhab ahaantii, filimka waxaa si daaha filimka dacaayad ah, xaq badan, laakiin haya in dhinaca singularity aan aadanuhu sida weeraryahanka Google ee Ray Kurzweil iyo Michio Kaku maqlay oo ku saabsan (eeg halkan).
Sidaas awgeed waa arrin adag oo lagu kicinayo dadka si ay u soo toosaan nidaamka. Laakiin waa maxay nidaamkaas? Waa maxay jaantuska? Si aad u fahmaan in ay tahay mid waxtar leh in fiira gaar ah fikradaha dadka sida Ray Kurzweil, Michio Kaku, Eeloon Miski iyo wacdiyayaal kale oo aanstuwers of transhumanism. Waxay u maleynayaan in 2045 aan awoodno inaan samayno nanotechnology nanotechnological (nuqul) oo ah jirkeena bini'aadamnimada, kaas oo aan ku mari karno miyirkayaga. Tani waxaa lagu muujiyey hab xiiso leh oo ku tilmaamaysa ficilada filimka. Waxay sidoo kale u maleynayaan in aanu nahay digital xaqiiqda la kordhiyay si loo abuuro adduunyo u muuqda kuwo dhab ah nolosha iyo meesha aan ku noolaan karno sida haddii aynu runtii ku noolahay. Ka feker cayaarta meesha aad haysato muraayadaha dhabta ah ee muuqaalka ah oo aad si buuxda u aqoonsan kartid ciyaartaas. Laakiin si miyir ah ayaa weli ku xayiran in maskaxda our, sidii wax ku biirtay 'daruurtii', si aynaan mar dambe u leeyihiin farqiga u dhexeeya jirkeena, our dhulka, our caalamka iyo Samo dijital abuuray. Taasi ma aha aragtida shirqoolka; Taasi waa waxa ay nasiib u yeeshaan. Fadlan ka fiiri Youtube adigoo raadinaya magacyada la magacaabay ee isku dhafan oo leh ereyga 'singularity'.
Waalidiinta noocan oo kale ah, oo wali loogu yeeri karo ganacsatada guuleysta (akhri halkan oo kale), Rumayso in aan gali kartaa miyir geliyey Caalamka dijital abuuray oo aan, sidii wax u nuugo in "daruurtii", waxaa laga yaabaa inaad la yaabban tahay bal in tani ma aha mar hore kiiska. Taasi waa xusuusta filimka Matrix. Ka feker in ay suurtagal tahay in xaqiiqda aad ku nooshahay ay mar hore noqon karto xaqiiqda la abuuray. Maskaxda ku hay sheekooyinka abuurista diimaha kala duwan. Ma noqon kartaa Taas macnaheedu waa buundo aad u fog oo dad badan. Dr. George Smoot ayaa soo bandhigay sheeko muujin ah oo hoos ku qoran. Qaado waqti aad ku eegto. Si aan waxba u dhicin, sayniska iyo transhumanists ayaa si firfircoon ugu hawlan arrimahaas. (akhri waxbadan fiidiyowga)
Ka dibna waxaan u imid su'aasha munaasib ah haddii ay macquul tahay in miyirkayaga ay horey u xirteen nidaam. Bal qiyaas in Google uu awoodo inuu abuuro xaqiiqooyinkaas dijital ah ee ay ku faafisay Ray Kurzweil oo aad go'aansato inaad ku wareejiso wargelintaada dhabta ah. Yaa xakamaynaya waayo aragnimadaada dhabta ah? Taas dabcan waa maamulaha 'daruur'; maamulaha Siminaarka Aqoonta Farsamada; maamulaha kaa wareejiyey miyir-qabkaaga; Google. Miyay noqon kartaa in xaaladdaani hore u mariso? Taasi waxay noqon kartaa mid aad u qosol badan oo feker badan oo feker ah ee indhaha dad badan. Laakiin haddii aad u maleynayso in filimka Matrix iyo aad tixgelisid in Hollywood ay ku jirto fasalka ugu sarreeya ee ina siinaya aragtida ah in scifi uu yahay sawir maskax ah oo aad ku raaxaysatid markaad cabto biirka iyo boorsada borrelnuts waxaad ka qaadi kartaa dhibaatada si aad u sii wado.
Mawduucyo dhowr ah ayaa boggaga internetka lagu qeexayaa sida dhabta ah ee aan u noolahay ay aad ugu egtahay mid xabsi laxiriira; sida Google ayaa mustaqbalkeyaga u qabsan kara mustaqbalka haddii aynu go'aansano inaan u gudbino caalamka dhijitaalka ah (cabbir) oo ay abuurtay Kurzweil & co. Fadlan u qaad dhibaatada si aad u akhrido maqaalkan hoos yimaada alaabta menu 'sawirka','ka baxsan qoraalka'iyo qaybaha kale. Dabcan sidoo kale waxaad sii wadi kartaa inaad rumaysantahay inaysan jirin nidaam iyo in Martin Vrijland uu doonayo inuu soo bandhigo sheekooyinka khiyaaliga ah. Anigu ma eedeyn karo taas. Sidoo kale waa mid aad u qurux badan haddii aaney jirin dareen qoto dheer oo ogaanaya in baaristaani bilaabmayso. Aragtida ama soo jeedinta 'inta badan' waxay inta badan ka bilaabataa iyadoo la arkayo been abuurka warbaahinta iyo waxyaabaha sida taariikhda been abuurka ah iyo waxay horseedi kartaa helitaanka helitaanka in ay jirto fasal midaysan oo u adeega Sucuudiga. Ka dibna waxaa laga yaabaa in helitaanku uu yahay in Saturn uu noqon karo midka ugu weyn ee xabsi daa'in ah oo xabsi ku jiri kara. Taasi waxay muujineysaa Hollywood-yada waxoogaa filimka 'Interstellar' oo ka socda 2014. Ma ahan wax filan in filimkaan uu ku guuleystay abaalmarinta 6 ee 'Saatun Awards"(ha fiirinin magaca) 2015. Ma waxaad dhiirigelisay inaad ka fakarto?
Soodhawrka xiriiriya: vari.com
Badanaa bini'aadinimada, maxay tahay sababta iyo sababta ay halis ugu jirto hadda?
Maxay dunidu u badashay xabsi furan dhawr sanadood
5G internetka oo dhan oo Nederland ah hadiyad ama xabsi dijitaal ah?
Facebook ayaa isticmaali doona sir sir ah si loo qiimeeyo waxa aad akhrin karto
Cabbirada kala duwan, qaababka software, miyir-qabka ama nafta. Waa maxay run?
Tags: featured, google, Martin Vrijland, Mr. Saamaynta Smith, rerun kurzweil, midnimo, Matrix ayaa, Forbrydelsen
Dhalinyarada ayaa qoray:
2 May 2017 ee 23: 22
Sidaas daraadeed EU-da ayaa noqda dawlad dhexe oo xasilooni ah, oo shakhsi ahaan hoos yimaado dawladda. Ka soocaan ajendaha ku-meel-gaadhka ah iyo xabsiyada dijitaalka ah (shabakad nabadgelyo), taas oo siin doonta bini-aadamkii ugu dambeeyay iyo xoriyadda bilaashka ah.
"Haddii aad rabto aragti mustaqbalka ah, waxaad qiyaasi kartaa dooni shaambo ku wajahan wajiga aadanaha - weligiis."
Dawladaha Boqortooyada Midoobey waa in la qaado iyada oo loo eegayo Siyaasadda Midowga Yurub:
Qorshaha Kalergi waa la sii balaariyay si loo aqoonsado shakhsiyadda qofka lumay, sidaas darteed shakhsiga ayaa si fudud u dhiibaya gobolka.
Canshuurta guud iyo kantaroolka EUSSR ee isticmaalaya shirkadaha hore sida Facebook / Google iwm.
Austria waxay raadineysaa adeegyada digital sida Alphabet Inc. ee Google ama Facebook Inc. bixiyaan canshuuraha muwaadiniinta internetka ee isticmaala internetka, isku dayaya in ay ku xiraan nidaamka canshuurta ee loogu talagalay ganacsiga kalluumeysiga iyo kuwa madow.
Qaybta ugu hami qorshaha Diirada lagu daydo ganacsiga ee Twitter Inc., Google ama Facebook ah: Heshiiska Bare hoos Imisa raacsan raadinta, jeclaanta, dhajinta iyo badato waxaa weli free ilaa iyo inta isticmaala ha shirkadaha daaqi xogta isticmaalka galay algorithms Taasi caawin advertising dawaarle taas oo loogu talagalay dadka iibsadaha ah.
MIDOOBKA DAMBIGA WAX KASTA ...
Aqoonsiga Elektronik ee Yurub:
Caqabadaha sharciga iyo mustaqbalka mustaqbalka (e-ID 2020)
2 May 2017 ee 23: 41
KALA DUWAN XADIISKA XANUUNKA IYO QALABKA
SHIRKADDA IYO INNOVA
Barnaamijka Taageerada Siyaasadda ee ICT (ICT PSP)
Aqoonsiga saddex-geesoodka ah (eIDs)
Mashruuca mashruuca oo buuxa: Aqoonsiga Qarsoon ee Baddan Xuduudaha Isku xirneyn
Tilmaamaha guud ee eID
Isku-xirnaanta shaqo-wadaagga e-Government
2 May 2017 ee 23: 43
2 May 2017 ee 23: 47
HADDII AAD KA BEDDAY?
2 May 2017 ee 23: 52
WAXAAN OGAATAA MACLUUMAADKA MACLUUMAADKA GOOGLE AH EE AAD OGAATO ... XASHIGA WAXAY ISKU DARAY. DATA HALKAN KA DHACAY GUDDIGA IYO GOOGLE / PALANTIR (CIA / NSA / DIA iwm)
Dhulgariirrada Groningen ... waxaa jira qorshe ka danbeeya taas oo caddayn karta:
2 May 2017 ee 23: 54
Waxay diyaar u yihiin in ay gacmahooda ku xoqaan NSA (SkyNet) ...
CuriousOne ayaa qoray:
4 May 2017 ee 14: 31
Fikrado aad sheegto SkyNet, Belgium waxaa sidoo kale jira shirkad internet oo loo yaqaan 'Skynet'. Kombuyuutar ayaa loo yaqaan 'Terminator'
Oo haddii aynu eegno movie Terminator (5) Genisys aad arki in sheegayaa sheekada SkyNet waxaa loo abuuray in deyay iyo 1 qaab-aadmiga oo dhan si loo abuuro tartanka dhiman xoog leh. Miyeey taasi ahayn waxa Google doonayso inay ka qabato 2029 / 2045?
"Nidaamka lagu gaarayo dhiman la'aanta wuxuu bilaabi doonaa 2029 markii nano-gaari la abuuray oo ku fidi kara jirkeena si aan ula dagaallamno cudurka"
Miyuusan ahayn waxa aan ku aragno Terminator filimka, jirka bini'aadamka oo ku xiran qaybo nano ah?
4 May 2017 ee 14: 34
4 May 2017 ee 16: 01
@CuriousOne, Waa dhamaan fariimaha NLP / subliminal ee aan ku aragno nawaaxigeena, Hollywood waxay qayb ka tahay. Filim wanaagsan oo ku saabsan fariimahan waa 'Waxay ku nool yihiin' 1988. Inta badan bani-aadminnimada waxaa loo diyaariyey tobanaan sano si loo fuliyo ajendaha 'abaabulidda' ee qorshaha argagixisada ah si ay u is casilaan marka ay timaado.
Jiilka YZ wuxuu u fiican yahay barnaamijka ama. lumay oo lumin doona khiyaanadaas:
- Y = Generation Y waa guushii cagaarshowga X oo guud ahaan lagu qeexay xilliga 1982-2001.
- Z = Ugu dambeyntii jiilka Z; qofkasta oo udhexeeya sanadaha 1992 illaa maanta ayaa lagu tiriyaa jiilkan.
Daraasada Google (DARPA) ayaa la mid ah barbar socota Agenda 2030. oo dhan Waxaannu waaleen tan Diaries 21 (Club of Rome) la eego sida joogtaynta, isbedelka cimilada, iwm taas oo ah in aan ka badnayn weerar lagu qaaday CO2 taas oo ah nafaqo muhiim ah ee dabiiciga ah oo aad ugu xidhmaan karaa in la yareeyo tirada dadka (eeg bandhig Bill Gates oo ku saabsan talaalka)
SkyNet waa (galmada / D-Wave) database NSA iyo dhismaha ciidamada warshadaha (DARPA) iyo Genysis waa mashruuc in bilaabay in 2002 by 'United States Department of Information Wacyigelinta Difaaca ee Office "Waaxda this ka dib ka dib markii dibad-(eeg logo Xafiiska Ka-warhaynta War-bixinta ee loo yaqaan 'canceled' iyo 'NSA's PRISM' waa natiijo ka timid mashruucan. Fikradayda, waxaas oo dhan waxay leeyihiin macno ahaan iyo muuqaal ahaan meel ka baxsan dhulka. Fiiri faallooyinka ka socda Elon Musk oo ku saabsan DUMBs wareysigan:
MACLUUMAADKA BIG waa eraygii Sixir la database kuwaas oo aad ka buuxsamay iyo sarbeeb waa in inta badan dadka in this isku si iskood ah u ururiyaan dhex profiles ay Facebook, Twitter, Google+ iwm iyo ilaa shukaansi isticmaalaya software Palantir iwm sidoo kale waxaa lagu muujin karaa waxa xiriirka bulshada ee shakhsi gaar ah. Ganacsi ahaan, dabcan, fikrad aad u soo jiidasho leh, sidaa daraadeed waxay badbaadineysaa shimbiro kala duwan oo midba midka kale ku dhacay. Isku xir khiyaarka EUSSR ee PSD2 iyo dhinacyada saddexaad ma laha ilmo si ay u helaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan shakhsiyaadka.
Gaaban, shabaqa si tartiib ah ayuu xiraa ...
4 May 2017 ee 16: 34
4 May 2017 ee 20: 52
Tani waa sida uu u bilaabmayo ... miyuu weli shaqeeyaa raaxaysi?
4 May 2017 ee 21: 04
Markaan arko macluumaadka ku saabsan adeegyada qarsoodiga ah iyo saldhigyada dhulka hoostiisa, marwalba waxaan arkayaa macluumaadka ku saabsan xaaladda Maraykanka, laakiin waa inaan la ilaawin in tani ay sidoo kale ka jirto Europe.
In la sii wado on SkyNet ka dibna wareegaya facebook, waa facebook ma bilowday inta badan in la xakameeyo dadka laakiin haddii si loo badbaadiyo dareenka iyo fikradaha in database a waqtiga marka lagu weheliyaan iyaga SkyNet qoray software ah in ay ku habboon shakhsiyadaada si aad loo xidho si dhakhso ah oo gacanta ku si degdeg ah ee jirkaaga.
Hadda waxay haystaan ​​kaliya koontaroolidda waxqabadka iyo fekerka NLP iyo farriimaha subliminal iyo ka dib Skynet oo ku saabsan jirka.
Kala saarida tani waxay noqon doontaa mid aan macquul ahayn, sababtoo ah software-ka ayaa si wanaagsan ugu qoran qoraalkaaga iyo inta aad ku xiran tahay, macluumaadka dheeraadka ah ee barnaamijku heli doono iyo qoto dheeraadka aad ku degi doonto. Haddii aanad dhigi karayn naftaada meel ka baxsan qotomada iyo dib u soo celinta xukunka jidhkaaga.
Tan iyo markii aan ka badan ama ka yar laftiisa toosin, xaqiiqda ayaa 1-2 sano ka hor gudbay waxa aan ogaadey waxa ay ahayd sax iyo khalad sababtoo ah macluumaad aad u badan / disinfo waa on shabaqa iyo YouTube in mararka qaar geedaha mar dambe arki karaa kaynta iyo Anigu waxaan arkey sida dunidu u shaqeyso, anigana daawada telefishinka ama filimka. Waxaan daawaday filim sababtoo ah waxay ahaayeen kuwo xiiso leh oo la yaabay markii aan daawaday hadda waxba kama arko calaamadaha iyo farriimaha qarsoon. Mararka qaarkood waxaan yara filim dib dhacdhacaan iyo ku celiska / waan dhagaysan waqti gaar ah lagu qoro 2-3 oo aan had iyo jeer yaabeen sida dunida ka shaqeeya ma ahi. Waxa la yaabay inta dadku ku xidhan yihiin TV-ga habeenkii sida haddii ay ahayd wax xur ah oo ay aaminsan yihiin wax kasta oo la sheego oo muujinaya. Waxaan ninna eedayn weligiis, maxaa yeelay, anigu waxaan tagay sidaas waxaan iyaga siin karaa qaar ka mid ah talooyin wanaagsan in aan naftayda raaco oo ha u arkaan sida ay u dhan wada ku haboon, ayaa sheegay in inta u dhaxaysa pill cas ama buluug dooran.
4 May 2017 ee 22: 14
@CuriousOne, Waxay ku saabsan tahay xakamaynta maskaxda (garashada) hal mar horeba waa mid aad u horumarsan haddaad eegto ganacsiga gudaha dhismaha warshadaha milatariga (oo ay ku jiraan DARPA). Oo inta badan waxaad diirada saartaa farsamooyinka farsamada (ELF Waves). Sida Nikola Tesla u sheegay, wax walba waa jaangooyo iyo qalalaaso, maaha wax aan waxba laga heleynin patents uu isticmaalo 'dawlad qotodheer'.
Hadda tixgeli horumarka iyo hirgelinta 4G / 5G waxaana jira hadda loo yaqaan GRID oo ku saabsan dhulka, badda iyo hawada. Si kale haddii loo dhigo, ma jiraan wax ka baxsan iskuxiridda signalka. gelitaanka. Sababtoo ah sida lagu qeexay dukumiintiga hoose, kaas oo aan kugula talineyno, maskaxdu ma hayso dillad. Wax kasta oo aan qarsoodi ahayn ayaa galaya ka dib marka loo shaqeynayo kuwa cortexs ay saameyn ku yeeshaan heerar ka weyn ama ka yar inta ay raacaan cuqadaynta. Sababta. Haddii aad kantaroolatid arrintan, waxaad qofka u dirtaa meel fog adoo isticmaalaya aljeer. Marka aan eegno, waxaan tilmaami karaa shaqada Marvin Minsky (khariidadda maskaxda) iyo Dr. Robert Duncan (whistleblower)
WAA INAAD AKHRISO:
Aragtida Mareykanka ee "Hubka Wonder": Isbedelka Awood-xirfadeed ee Macluumaadka Dhismaha
Maxaa teknoolajiyada lagu baaro by Maraykanka Taasi hanti awood u leh in uu carqaladeeyo awoodaha data processing ee u shaqeeyo aadanaha? The arrinta 7 July 1997 of US News iyo World Report tilmaamay dhowr ama iyaga loogu talagalay, iyo waxyaabo kale, si ay u gariiro gudaha aadanaha, stun ama nauseate iyaga, oo wuxuu ku riday si ay u seexdaan, iyaga kululeeyo kor, ama hoos u garaacayaa la ruxruxo lama filaan ah  Teknoolojiyada waxaa ka mid ah laser lazer oo ardayga ku qasbi kara inuu xiro; mawjadaha loomana baahno ama Sonic Taasi waxay keeni unugyada timaha dhegta gudaha si ay u gariiro iyo sababi bukaanka mooshin, vertigo, iyo lallabo, ama ay mawjadaha resonate in xubnaha gudaha keenaya xanuun iyo dubaaxin; iyo hirarka lama filaan ah awoodana in ay ku hormartay aadanaha ama diyaaradaha kaas oo lagu qasi karaa buufiyo basbaas ama kiimikooyinka. 
Iyadoo la isbeddelayo, codsiyada farsamada ayaa isticmaali kara isticmaalo badan. hubka loomana baahno, tusaale ahaan, waxaa loo habeeyey ayaa laga yaabaa in loo isticmaalo sida qoryaha dhidibka loomana baahno ama beeraha loomana baahno in, mar la aasaasay, laga yaabaa in ay ilaaliyaan xarumaha, gacan ka samatabbixin afduub, rabshado gacanta, ama waddooyinkeeda cad kolonyo. Hirarkaas, kuwaas oo geli kara dhismayaasha, waxay bixiyaan fursado ciidamo iyo saraakiisha fulinta sharciga. hubka microwave, by madadaalo habdhiska ka durugsan, kululeeyo kartaa jidhka, u abaari suuxdin-sida qalal, ama sababi wadnaha. Shucaac-hoosaadku wuxuu saameynayaa calaamadaha korontada iyo kuwa hargabka iyo lallabbada. Mashaariicda kale waxay raadinayaan in ay soo jiidaan ama ka hortagaan hurdada, ama ay saameyn ku yeeshaan qeybta kore ee maskaxda, taasoo ka dhigaysa dhaqdhaqaaqyo murugo oo ikhtiyaari ah. Dawladda Ruushka ayaa la sheegay inay ka iibsatay nuqullada 100,000 ee "Carmalada Black" oo iyaga ka mid ah 
Si kastaba ha ahaatee, aragtidan "hubin cajiib ah" ayaa lagu murmay qof ay tahay inay fahmaan. Brigadier General Larry Dodgen, Ku-xigeenka Kaaliyaha in Xoghayaha Difaaca Siyaasadda iyo Ergada waayo, warqad u editor ku qoray oo ku saabsan "badan ee qalad" maqaal News US iyo World Report in "been Waaxda views Difaaca ee."  cabasho hoose Dodgen ayaa u muuqatay inay lugta Taasi majaladda been adeegsiga tiknolojiyada Avv oo ay qiimo ciidamada qalabka sida. Tooth Waxa uu hoosta ka xariiqay ujeedadu Maraykanka in ay ka shaqeeyaan ka leexinayn ee heshiisyada caalamiga saabsan waxay codsiga, iyo sidoo kale qorsheyneysa in ay ka tanaasulaan (ama ugu yaraan naqshadeynta) hub kasta oo countermeasures Sidee taageerayaal badan waxaa lagu yaqaan. Mid ka mid ah dareenka ayaa ka tagay, si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaristaan ​​meeshan waa mid aad u daran. Koox aan xusay by Dodgen yahay in dalal kale ama hay'adaha aan dawliga ahayn laga yaabaa inuusan ku xidhnaan by caqabadaha isku. Way adag tahay in la qiyaaso qof leh rabitaan ballaaran si uu gacmahooda ugu helo tiknoolajiyadaan. "Cilmi-nafsi-argagixisannimo" waxay noqon kartaa erayga soo socda.
bandhig wanaagsan dhamaadka su'aal aad u muhiim ah Harald Kautz Vella (at 54: 40) la Creutzfeldt-Yacquub iyo tijaabo on sac iyo aadanaha ee England ± 1997.
4 May 2017 ee 22: 22
Ma jiraan wax asaas ah tiknoolijiyadaan? Waa hagaag, Shaybaarada Cilmi-baarista Holosonic iyo Shirkadda Teknolojiyada Mareykanka, labadaba waxay leeyihiin noocyo cod oo toos ah oo aan la maqli karin. DARPA waxay u muuqataa in ay ka shaqeyneyso mashruuca sonic ee u gaarka ah. Dabcan, Warbixinta Istaraatiijiga ah ee isticmaalaya Qalabka Long Range Acoustic Device sida beddelka codka ah ee hubka Ilaaha:
6 May 2017 ee 01: 55
waxaa jira tijaabin 5G ee Groningen, Friesland wax aanan ka helin wax ku saabsan. Marka laga reebo inay dhib ku hayaan halkaas:
"Xarunta kormeerka ugu weyn ee Nederland waxay ku taallaa tuulada Frisian ee Burum. Isgaadhsiinta satellite-ka waxaa kormeera xukuumadaha Dutch-ka iyo Mareykanka iyada oo loo marayo saxaaradaha waaweyn ee satellite-ka. Saldhigkan kormeerka ayaa u muuqda inuu istaagi doono habka horumarinta ee shabakadaha 4G ee Nederland.
saldhigga dhulka satellite ee Friesland Burum, halkaas oo AIVD Holland (Service Security Intelligence Guud iyo) oo ku hoyatay (Service Security Intelligence Military iyo) ayaa saxamada satellite u taagan eavesdropping iyo basaasnimo, horumarinta shabakadaha 4G ee Netherlands ayaa u muuqata arrin jidka ku tifaftirayaasha cilmi-baarista ee Telecompaper ayaa la ogaaday. "
Sidaas waxa ay u muuqataa macquul ah in ay tijaabinayaan inay dhibaatadan in lossen..Friesland iyo Groningen ku haboon yihiin sida aagga pilot ee noocan ah ee wax, oo kaliya sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo ah meel madhan oo aan xiriir iman kara oo ku filan si ay u dhisaan Maro .
Ma aha sida weyn ee qarsoodiga ah ????
11 May 2017 ee 19: 46
@ Averoes Dhibaatooyinkaas in Friesland waxaa loogu ballaariyo 4G network 5G / 3000 + mawjadaha MHz. 4G iyaga hore u rakibi 800G inta jeer 1800 / 2600 / 5MHz lagu rakibi doonaa on 700Mhz sidoo kale awoodo 2100 2600MHZ iyo haddii aan qaldo ma ahi. The inta jeer ee hoose xoog signalka, laakiin gaadiidka xogta hoose, signal a hoose wuxuu ahaan karaa qoto dhex gelin galay guryaha iyo tegi karin waxyaabaha fiican iyo caqabadaha. Heerka sarreeya, ayaa daciifinaya calaamadda, laakiin korodhka gaadiidku wuxuu noqon karaa.
Tusaale la wifi oo router waa dhexe ee guriga, halkaas oo aad hadda band 2.4Ghz iyo band 5GHz 2.4Ghz band dibadda weli helin karaan laakiin wuxuu noqon doonaa heerka xogta ugu badan BV 150Mbs, signal tabardaran ah si dabiici ah ka yar laakiin weli waxaad weli u hesho, at band 5GHz heerka ugu badnaan xogta BV 300 Mbs noqon doonaa oo kaliya signal this guriga ka baxsan ma heli doonaan karaan.
Waxa kale oo dhan waxay ku xiran tahay sida iyo meesha signal la kala qaado, waan ogahay iyaga in ay ku riday meelo cusub iyo aad u badan anteenooyinkooda waxa ay kusii dhowaanayaan dhaadheer mawjadaha sare si ay u bixiyaan dhakhso iyo sida xog dheeraad ah. Tani waxay kor u kacday bilihii ugu dambeeyay. Labada goobood ee dadweynaha iyo gudaha gudaha dhismayaasha / shirkadaha Wi-Fi 3g / 4g iyo 5g waa in la helaa.
5 May 2017 ee 22: 03
muuqaal xiiso leh Duncan, laakiin caleemo walaac leh ????
sida laga soo xigtay maqaalkan BBC-da ee BSE-da ayaa ka soo baxday 1986:
5 May 2017 ee 22: 07
Tijaabadan ayaa aniga ii ah sida diyaar u ah bur burka .. Fryslan iyo Groningen waa meelo fiican
6 May 2017 ee 02: 03
Beeralayda Nederland, gaar ahaan waqooyiga (bari), laguma dhiirigelineynin inay beerahooda ku hayso sababo awgeed, ujeedada aragti:
'Xaqiiqdii beeralayda caanaha 1000 ayaa dhawaan joojin doonta'
Bilaha soo socda, 1000 waxay la socon doontaa beeraleyda caanaha 2000, waxay filayaan in Xoghayaha Gobolka Van Dam. Wuxuu u malaynayaa in tirada beeralayda ay isticmaali doonaan qorshe joojin cusub, qayb ka mid ah heshiis dhexmaray isaga iyo beeralayda caanaha in guddiga Yurub uu ansixiyay caawa
Xiliga waajibaadka saaran meelaha ay hoos u dhaceen
Golaha wasiirku waxa uu rabaa in uu xoojiyo mawqifka caalamiga ah ee ay Holland ku leedahay xidhiidhka wada-hadalka. Taasi waa sababta Wasiirka Maaliyadda Dhaqaalaha uu ku soo rogi doono waajibaadka maalgalinta ee xaraashka mustaqbalka ee isdabajoogga, tusaale ahaan 5G. Waajibaadku wuxuu khuseeyaa gaar ahaan meelaha la deggan yahay ee Nederland halkaas oo xiriirka mobile uusan weli ku filnayn. Wasiirka Qorshaha ayaa ku dhawaaqay warqaddan Golaha Wakiillada. Horaantii bishan, dowladdu waxay ku calaamadaysey 'marwalba iyo meel walba' helitaanka isgaarsiinta wireless sida baahida asaasiga ah.
2 May 2017 ee 23: 58
William Binney (oo hore uga tirsanaa NSA) wuxuu sharxayaa:
3 May 2017 ee 00: 25
Nidaamka siyaasadeed ee dhaqaale ahaan waxa uu ka koobanyahay lahaanshaha gobolka ee hababka wax soo saarka, gaadiidka iyo ganacsiga, iyo hagaajinta maamulka ee sicirka (ie ma aha suuqyada). Siyaas ahaan iyada oo ay ugu wacan tahay doorka hoggaanka xisbiga ee xisbiga; iyo bulsho ahaanba adoo awood u leh in ay ku biiraan dhammaan ururada bulshada iyada oo isku dhinac ah.
3 May 2017 ee 14: 03
Tani ka dib, isbarbardhig dukumiintiyada STORK (EU) iyo kaabayaasha waxa ay ku xiran yihiin waxa DARPA (= Google, kuwa kale) waxa ay soo saareen iyada oo loo marayo barnaamijkeeda Ogolaanshaha Wadarta / Barnaamijka Genisys:
Aqoonsiga Dadweynaha ee Fogaanta (HumanID)
Jaantuska (laga bilaabo bogga rasmiga ah ee IAO) oo tilmaamaya awoodaha "mashruuca" Mashruuca fog "mashruuc 
Aqoonsiga Human ee mashruuca Distance ah (HumanID) hormariyey iswada farsamooyinka aqoonsiga jismiyeed in la ogaado, Aqoonsiga iyo aqoonsado aadanuhu fogfog weyn for "ilaalinta ciidan", ka hortagga dembiga, iyo "/ ammaanka dalkiisa difaaca" ujeeddo. 
Hadafyadeeda waxaa ka mid ahaa: 
Horumar algorithms oo ku saabsan helitaanka iyo maadooyinka laga helo mitirka 150 (500 ft).
Maqnaanshaha wejiga iyo wajiga lagu aqoonsado nidaamka aqoonsiga aadanaha 24 / 7.
Samee oo muujiya nidaamka aqoonsiga aadanaha ee ka shaqeeya mitirka 150 (500 ft) isagoo isticmaalaya sawir muuqda.
Horumarinta habka awoodda milimeterka awoodda hoose ee milimeterka si aad u hesho aragti balaadhan oo sahlan oo lagu eegayo dhinacyada kala duwan ee taranka.
Waxay muujiyaan waxqabadka gaititaanka ee fiidiyowga loogu talagalay aqoonsiga aadanaha meel fog.
Horumarinta nidaam aqoonsi sawir-maskaxeed iyo muuqaal oo muuqaal ah.
Qodobka Dadku hadda waxay daryeeli karaan talooyinka Facebook, Google+, Twitter iwm
3 May 2017 ee 14: 15
Google 'Sieg' Hire hadda waa la saadaalinayaa fiidiyaha kor ku xusan:
Waa inay noqotaa nooc ka mid ah dilka LinkedIn; ATS iyo mashiinka raadinta banaan hal hal. Loo shaqeeyayaashu - waxay ku xiran yahiin wararka xanta - shaqooyinka boostada (sida ku cad boggan), inta la maamulayo codsadayaasha soo socda ee soo galaya. Google Hire (muuqaal ahaan) ayaa sidoo kale la xiriirta xisaabaadka Google. Tani waxay suurtogal u tahay inay bixiso macluumaad badan oo ku saabsan labada shaqo-bixiye iyo musharraxiinta.
PasOpSmoking waxay ka hortagtaa maskaxda ayaa qoray:
3 May 2017 ee 06: 42
Waxaan dhawaan booqday barracuda, blogspot. Markii ugu danbeysay ee ahaa oo ku saabsan 2 sano ka hor, sababtoo ah weerarrada ka mid ah lalabo markii reading ku articles "Mr. Smith saamayn" sida aan xusuustaa si sax ah ku qoran inta badan by troll dowladda Jeroen Hogeweij, xubin ka mid ah Rotterdam ee
Masonic club 'Cafard d' Or '(Coconach Golden)
Maqaaladii ugu dambeeyay ee barracuda khudbadaha wakiillada mucaaradka ah ee ka soo horjeeda waxay noqdaan kuwo cad:
Wakiilka mucaaradka Maud Oortwijn ayaa ku dhowaad la aaminsanyahay
Inta kale, Micha Kut dabcan waxay ka timaadaa '' Old Police '' iyo wax la yiraahdo Koos Woudenveld oo horey u soo qoray sheeko xajin ah oo ku saabsan shabakada rolodex pedo.
Wakiillada mucaaradka ah ee Moor Mauritz iyo Wim Dankaraar ayaa ku aflaxay,
Pizza ayaa leh darajo 'seaman'.
Qof kasta oo runta ah oo khibrad leh ayaa ogaaday waqti dheer in dhammaan dadkani ay kufsanayaan.
Haatan waxa ay noqotaa mid cad oo la ciyaaro.
Waxay yihiin dhammaan kulliyadaha dowladda ee Jeroen Hogerweij, oo leh door ka duwan, laakiin hadafkaas oo kale.
Tilmaamaha iyo daaweynta maskaxda 'fikradaha kala duwan' / runta raadiyaha.
3 May 2017 ee 07: 11
Dib u soo kabashada, waa inay noqotaa: Koos Woudenberg.
3 May 2017 ee 07: 33
Weli waxaad ku arki kartaa sheekada qaylka ee buuggan wasakhaysan: "Koos Woudenberg wuxuu ka hadlaa badda badda" Sexbierum "
Waxaan ku soo wargelinayaa qashinkaas sanduuqii hore ee rajada ah in runta raadiyaasha ay horumariyaan xirfadaha barashada si loo aqoonsado aqoonsiga khatarta ah ee maskaxda.
qalloociya Tani waxay cabsi badan afkiisa dhanaan dareemay wayn iyo sidoo kale inay wax ka qabtaan oo sidaas daraaddeed ma ay jaceylka kubada inta badan ay gacanta ku wakiilka mucaaradka Myra ee "hadal Myra'- kaliya wareysi radio ah, laakiin si doonayay inuu jeclaan screen Rafaa.
Ku dar link / xirxiran dhibcaha, oo leh cilmi-baarisyo kale oo adeega dawladda sida NIco van der Ham, Maud Oortwijn, Michael Vittaliti, Micha Kat.
Dhibaatooyinka dhabta ah ee raadinaya, runtii ka digtoonow Nico van der Ham, wuxuu u muuqdaa mid fudud, laakiin waa jiir habdhiska moodada.
3 May 2017 ee 07: 37
Ninka ka danbeeya Barracuda waa "saxafi": aqri AIVD-er) Jan Libbenga. Waxa uu sidoo kale la shaqeeyaa naadiga Jeroen Hoogeweij (xubin ka mid ah Aleister Crowley oo dib uga laabtay qaybta RTD).
3 May 2017 ee 08: 17
Steve Brown (Salto TV) ma u egtahay sida qaxwadaag cusub ... waxay dhamaanteed ku jiraan Amsterdam iyo hareeraheeda
3 May 2017 ee 08: 20
Dhinaca kale, waayo-aragnimadayda (akhriska) ee Barracuda waa in Sionist hardbadan ma aha xusuus muhiim ah oo ku saabsan xaaladda sharci darrada ah ee reer binu Israa'iil. Dhab ahaantii, waxay cibaadaystaan ​​waxa runta ku shaqeynaya oo keliya ayaa shaki gelin doona shaki
3 May 2017 ee 08: 36
Taasi waa run. Ziva (mid ka mid ah qorayaasha ugu firfircoon on Barracuda la xiriira blog Swapichou) xitaa fadhiisan ciidanka Israel iyo ku nool Tel Aviv (oo ay ku jiraan caddaymo). Waxay yihiin dhammaan qaybo xirfadle ah kuwaas oo maamula boogahaas.
3 May 2017 ee 08: 24
3 May 2017 ee 09: 59
Sidoo kale daawato baxay madaxda siiban koox cusub qasaan wax run ah warkii fantastic ah kooxaha intergalactic iyo interdimensional la wadaago oo aad u sheegto in aad halkan dhulka si aad naftaada firfircooni. Nebi Nabi cusub: Martijn van Staveren. Muxuu kharashkaas ku baxayaa? Maxaa taabta Waa in ay maamusho warbaahinta kale (Matters Earth, Guido Jonkers (WantToKnow.nl, iwm) oo dhan. Bixiyaan beerta kasta. Haa, mudane this ku hadla ee maxalka furta oo jira qeybo ka mid ah run waxa uu sheegay in. Xaaladdan oo kale, waxa aan ka qabashada qof ka (iyo) uu ku dhashay interdimensional / xiriir leeska. sidaas ayuu hore u ogyahay waxay noqotay this aqoonta ahee adag oo ku saabsan dhinacyada adag weyn iyo waxa u dhexecya interdimensional sidaas awgeed waa aqoonba lagu siiyey ka cusub. Galliani (oo sidaas aad u adag oo ka dhigay pompous). xaqiiqadu waxa hocus dhan pocus wax badan ka yar Galliani cusub keentaa. waa noqon lahaa faani mar kale ka shaqeeya diinta cusub ay dhacdo in this shaqaalaha iftiinka. isagaoo Alice Bailey. leh Saturn beerta, khiyaano? Ka digtoonow hypnoses:
3 May 2017 ee 10: 30
Weli wax badan ayaa jira ... aad u adag ... sidaas darteed waa inaad is-xoojisaa naftaada si loo hubiyo in aan ku soo laabano asalka. Mar labaad nooca is-beddelka iyo ixtiraamka sida aan ka ogaanno diimaha. Ku soo dhowow adduunka Lucis Trust
3 May 2017 ee 10: 41
Marcel dhibaato loogu, ninkii gooni ii soo qaaday intii uu socday shir la soo dhaafay Frontier ee Amsterdam si uu ii digo in "ay" Ma ku raacsan tahay hub tamarta si toos ah loo gelin lahaa. Ninkii isku dayay inuu dhiirrigeliyo cabsi. Ninkii u duubay Micha Kat. maxaa yeelay, waxaad maqli kaliya kooxda, haddii aad tahay shaqaale fudud ee "macalinka waa kan lab ama dhaddig" (eeg 12 :. 03 min) iyo tahay side of waxbarista Alice Bailey. Waxaan wada ognahay cidda metelaysa hermaphrodite: Baphomet. Ku soo dhowow aduunka iyo diinta cusub ee Saturn.
3 May 2017 ee 10: 49
Marcel Masiixa kasbada dahab galay circuit cashar la prietpraat..Een qaxwaha aan dhadhan lahayn nin yar aad u cabsi, laakiin ka dibna mar kale uu mid ka mid ah 't waxa nalalka kooxda kulan si ay u faafiyaan nuurka been ah (xitaa laga yaabaa inaad tiraahdo been a).
Iyo bulshada dhexdeeda ma sameyn kartid wax, sababtoo ah xeerarka Große Lüge:
3 May 2017 ee 11: 22
Waxaan sidoo kale dareemay in ay isticmaalaan farsamooyinka iskudhafka ah, halkaasoo ay isku dhafan yihiin runta. Hadal kale waxay kuugu yeeraan runta iyo maskax-fuufka aad kuhesho beenta si aanad u arki karin kaynta dhexdeeda geedaha oo aad ku dhacdo khiyaano cusub 'da' cusub.
Ku soo dhawow aduunka cajiibka ah ee sunta cusub. Marka la eego, New Age wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Kabbalah / Zohar / Talmud.
3 May 2017 ee 11: 31
Si sax ah: aad u jilicsan
laakiin Van Staveren ayaa aniga ii soo maraya dambi isaga oo la hadlaayay hadalkiisa hypnosis iyo xusuuskiisa ku saabsan "kan aan aheyn nin ama naag" ...
Wuxuu ka dhigayaa mid aad u adag oo fahmi kara oo keliya haddii aad xiriir la leedahay ciidamadan sare tan iyo carruurnimadiisii: sidaas awgeed wuxuu isu beddelayaa nooca guryaha.
Dhamaan ma aha mid xiiso leh oo dhib badan sida uu sameeyo. Xaqiiqdii maaha inaan noqonno shaqaale fudud. Ma jiro cid loo doortay oo u baahan "awoodsiin."
3 May 2017 ee 19: 07
Markus Passio sidoo kale ma aha mid lagu kalsoon yahay. Wuxu calaamadda jooggo halkan anigoo aad u wanaagsan (sida haddii ay jiraan sidoo kale waa fariin waxbarasho) oo waa mid u Kaalmeeya Aleister Crowley (kan qudhiisu yeedhay 666 bahalka).
Haddii uu ka hadlayo dhagaxa geeska ah ee looga baahan yahay in laga saaro iftiinka iyada oo loo marayo abuuraha dardaaranimada, markaa waa "iftiinka Lucifer" (abuuraha).
Ninkani sidoo kale wuxuu shabakadda badbaadada khatarta ah ka dhigayaa indhahayga.
4 May 2017 ee 17: 23
@Martin, hal mar Passio waa gatekeeper iyo khiyaamo, laakiin wuxuu hayaa macluumaad badan oo ku saabsan bulshooyinka kuwaas oo ku haboon dhageysiga.
Sawirkaan waxaan ka helay shabakadda internetka waxayna siisaa sawir wanaagsan oo asal u ah jinsiyadaha yurub ee dhan:
3 May 2017 ee 11: 33
Khariidadda cusub ee kabbalah
3 May 2017 ee 13: 02
Waxaan dhimi karaa joojinta sawirrada muusikada. Sidoo kale waxaan isku dayaa inaan wax ka soo qaato ardayda kale. Waxaan u maleynayaa inay tahay arrin aad u xiiso badan oo la sameeyo, waxayna sidoo kale muujineysaa lakab qoto dheer ee turjumidda.
Hanneke, aad ayaad ugu mahadsan tahay aqoon-is-weydaarsi aad u xiiso badan, nasiib wanaag 2 ayaa imanaya.
Waxaa si weyn loogu talinayaa qof kasta oo raba in uu qoto dheer u galo astaamaha! "
Waxaad u maleyneysaa in lagu caawiyay bogga midabaynta.
camera ayaa qoray:
3 May 2017 ee 22: 46
Sidee ayaad u aragtay in Grateful Faa'iido ka dhigtay kaalin saafi ah ee riyadu.
Marka waxaan idinku leeyahay inuu isticmaalo luqadda weli nin saanac ah oo ku filan, laakiin si xariif bulsho doqon ma xariif ah laakiin sida Nico van der Ham, nooca Khayaamo saafi ah ee (fanaaniinta majaajilada naxdin in dacwana habaas leh)
Ku calaamadee qaybtiisa, fiiri isku xirka hoose: "xitaa hooyaday qaaliga ah waxay u maleyneysaa in aniga ... Haa, ha ha aad si dhab ah u qaadan kartid haddii aad ku qorto qaybta aadka u culus ee ku saabsan qaladka dawladda (caddaaladda) iyo in ka badan
3 May 2017 ee 13: 15
Isagoo ka hadlaya 'cadaawada', waxaan ku soo baxay maqaal xiiso leh oo ku habboon adegga: Dhibaatada-Falcelinta-Xalka.
Dhalinyarada yurub ee aan codka bixin - laakiin waxay diyaar u yihiin inay ku biiraan kacdoon ballaaran
Dadka yaryar ee yurubiyanku way jiran yihiin xaaladdaha Yurub. Waxaana ay diyaar u yihiin inay isbedelaan, sida laga soo xigtay sahan dhawaan.
Qiyaastii jawaabayaasha 580,000 ee ku sugan wadamada 35 ayaa la waydiiyay su'aasha: Ma jeclaan lahayd inaad ka qayb qaadato kacdoon ballaaran oo ka dhan ah jiilka awoodda haddii ay dhacday maalmaha soo socda ama bilaha? In ka badan kala badh ama 18 - ilaa 34-sano jirku waxay yiraahdeen haa.
Nasiib ahaan waxkastaa ... Nederland (Orange = 33) ayaa ku dhammaatay xNUMXe oo leh saamiga 13%. Waxay u muuqataa natiijooyinka doorashada VVD? , xog la soo saaray? Waxay caddaynaysaa mar labaad tallaabooyinka.
28 September 2019 ee 17: 24
Mid ka mid ah dixiriga loo safro Interstellar ayaa la dhigay meel u dhow meeraha Saturn. Iyadoo loo marayo halxiraafka mid ayaa u gudub galalas kale, halkaas oo meeraha laga helay halka ay suurtagal tahay nolosha.
Dembiilaha ayaa umuuqda inuu farriin mustaqbal leh u diray naftiisa, si uu ugu diro NASA, halkaasoo ay ka dhacayaan iyagoo ku mashquulsan bilaabida duulista masaajidka. Si kastaba ha noqotee, dirxiyuhu wuxuu u muuqdaa inuu halkaas ku jiray sanado 48. Waxa kale oo jira god madow oo u dhow dacartii, Gargantua. Sida dirxiyuhu u eg yahay filimku wuxuu u eg yahay sawirkii ugu horreeyay ee god madow oo lagu dhawaaqay horaantii sannadkan. Nooca barnaamijyada saadaalinta si….
« Edith Schippers hadda waxay rabtaa astaamaha DNA-ga
Elon Musk ganacsade weyn ama DARPA oo saxiixay saxiixa nin cyborg ah? »
Guud ahaan Wadarta: 1.384.925